Ungamthola Kanjani Umuntu Ku-Intanethi: Amawebhusayithi Ahamba Phambili | Izindaba zamagajethi
Ungamthola kanjani umuntu online?
U-Eder Esteban | | General
Lapho kufanele sifune umuntu, sihlangabezana nezindlela ezahlukahlukene. Esikhathini esedlule bekufanele sisebenzise amakhasi amhlophe, abengasiniki imiphumela ebilindelekile njalo. Empeleni, lapho sifuna ukuthola umuntu sikwenza ngokusesha i-inthanethi. Ikakhulu uma sinegama lalowo muntu kuphela, kepha asazi okuningi.
Ungamthola kanjani umuntu kwi-Intanethi? Sinezinketho ezimbalwa ezitholakalayo namuhla, esingathola ngazo umuntu ebesimfuna, ukuze le nqubo ibe lula futhi iqonde ngangokunokwenzeka. Kunamakhasi ewebhu amaningana lokho kungasiza kule nqubo yokusesha.
2 Amakhasi amhlophe
Inethiwekhi yokuxhumana nabantu isibe enye yezindlela ezinhle kakhulu zokusesha othile ku-intanethi. Ezimweni eziningi singasebenzisa igama lalo muntu, ngaphezu kokukwazi ukwengeza idolobha, uma kungenzeka silwazi lolu lwazi. Kwethulwa njengenye yezinketho ezintofontofo lapho ufuna abantu, ngenxa yenani elikhulu labantu emhlabeni jikelele abanephrofayili kwinethiwekhi yezenhlalo ethandwayo.
Kumele siseshe ngaphakathi kwe-Facebook Sisebenzisa igama lalo muntu, uma sinemininingwane eyengeziwe efana nedolobha ahlala kulo, singalingeza ngemuva nje kwegama lakhe. Sizobe sesithola yonke imiphumela ehambelana nalelo gama, kwezinye izimo, ukwahluka kwegama kuyakhonjiswa (nenye incwadi, noma uma kufinyeziwe). Ngakho-ke kungenzeka ukuthi simthole lowo muntu.
Singaqhubeka nokusebenzisa amakhasi amhlophe njengaphambilini, kepha manje kwi-intanethi. Njengoba banewebhusayithi yabo, ongafinyelela kuso kulesi sixhumanisi. Kuyindlela yakudala, kepha isasebenza lapho sifuna ukuthola othile. Ukwenza lokhu kwenzeke, sicela ukuthi sigcwalise okungenani eyodwa yalezi zinkambu ezintathu: igama, isibongo sokuqala kanye / noma isibongo sesibili. Ngale ndlela, sizokhonjiswa imiphumela ehambisanayo.
I-database enayo amakhasi amhlophe isabanzi impela. Ngakho-ke endabeni yeSpain, ikakhulukazi uma sifuna umuntu ongenayo i-Intanethi, khona-ke kungaba yindlela elula impela. Imininingwane yokuthi ungaxhumana kanjani nalo muntu imvamisa inikezwa, njengenombolo yocingo. Ngakho-ke, singazisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwenkinga eningi kakhulu.
Le webhusayithi ingenye ye- iningi labantu abafuna kakhulu esihlangana nabo. Njengoba ine-database enkulu, ngokuya ngewebhu cishe ngabantu abayizigidi ezingama-3.000. Ngakho-ke, kuyindlela enhle uma kukhulunywa ngokuthola umuntu kwi-Intanethi, ngoba kunamathuba amaningi okuthi sizomthola lo muntu. Ukusebenza kwewebhu kuyafana nokwenjini yokusesha yendabuko, kuzofanele sisebenzise eminye imininingwane yalo muntu (igama, isibongo, idolobha, njll.). Ngakho-ke sinezinketho ezimbalwa zokuyithola.
Into enhle ukuthi ikuvumela ukuthi ufake izihlungi eziningi oseshweni lwakho, ukuze sithole imiphumela engcono lapho siyisebenzisa. Ngale ndlela, singaphumelela kakhulu lapho kufanele sifune othile, ikakhulukazi uma enegama elijwayelekile. Ingenye yezinketho eziphelele kakhulu, ezisebenziseka kalula nezisebenza kahle, ngakho-ke ungathola lowo muntu obukade umfuna kwi-Intanethi. Ungangena ku-Pipl kulesi sixhumanisi.
Leli thuluzi lihlukile, njengoba ligxila kulawo macala lapho une-imeyili evela kumuntu noma ofuna i- umuntu osebenza enkampanini ethile. Uma unalolu lwazi, ungabhekisa kuHunter, okungenye yezindlela eziphelele kakhulu kulokhu. Ikakhulukazi esimweni sezinkampani ezinkulu, kungahle kube nentshisekelo ukuthola imininingwane yomuntu, futhi ngalokho wazi ukuthi ungakwazi kanjani ukuxhumana naye. Bane-database enkulu kakhulu etholakalayo.
Ngakho-ke, iyiwebhusayithi enhle uma kukhulunywa ngokuthola umuntu, kodwa ngendlela ehlukile. Njengoba kulokhu siqala emininingwaneni ehlukene, njengokuthola ikheli le-imeyili ngalo mqondo. Singacinga abantu kuzo zonke izinhlobo zezinkampani, ezivela kuwo wonke umhlaba, okungangabazeki ukuthi enye inzuzo esinikezwa yona yile webhusayithi. Uma ufuna ukungena, ungakwenza kulesi sixhumanisi.
Njengamakhasi amhlophe, okunye okudala esasinakho ekhaya, kepha lokho esingakusebenzisa manje kwi-Intanethi, yi-QDQ. Kuyisiqondisi esingasisebenzisa ukuthola ulwazi mayelana nezinkampani, noma singasetshenziswa uma sifuna ukuthola ulwazi ngabantu ngabanye. Ngakho-ke singasesha umuntu othile, ukuthola inombolo yakhe yocingo noma ikheli, isibonelo. Inketho yakudala, ehlala ingeyamanje.
Ukuseshwa kwabantu kuleli cala kumele kusetshenziswe ngendlela ehlukile, kulesi sixhumanisi. Siyacelwa ukuthi sifake imininingwane ethile ngalo muntu Sifunani. Njengoba kunengqondo, kufanele sethule lezo esinazo, ukuze sithole imiphumela eqonde kakhulu kulokhu. Ngemuva kwalokho leyo miphumela evela kubantu efana namatemu akho okusesha izoboniswa. Enye indlela enhle yokuthola umuntu kwi-Intanethi futhi ukwazi ukufinyelela kwimininingwane yabo yokuxhumana.
Endaweni yokugcina, singaphendukela kwenye ingosi yokuxhumana nabantu, kuleli cala labasebenzi. Kungenzeka ukuthi umuntu esimcinga ku-Intanethi ngumuntu esihlangane naye ngomsebenzi, noma esifuna ukuxhumana naye ngenxa yezizathu zomsebenzi. Ngakho-ke, singazama ukuthola ukuthi unephrofayli yini kwinethiwekhi yezenhlalo yomsebenzi owaziwayo. Futhi, ukuseshwa kuleli cala kungasebenza.
Kusukela lapho usesha ku-LinkedIn, singasebenzisa izihlungi, njengokungeza idolobha, umkhakha womsebenzi (kuhle uma siyazi inkampani noma umkhakha umuntu lo asebenza kuwo), kanye neminye imininingwane. Konke okudingekayo ukuze sikwazi ukuthola lowo muntu ngendlela elula kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungamthola kanjani umuntu online?
Izesekeli ongeke uzikhumbule ukuqeda ihlobo [SWEEPSTAKES]
I-Android Q izobizwa nge-Android 10 isivalelise ngophudingi: sibukeza wonke amagama amaswidi owasebenzisile